Amalawwan bal,ina tarjaa ifteessi.
Bal,ina tarjaa amanfadhuu
Gitaan tarjaawwan mijeessi
Gabateedhaaf bal,ina tarjaa ifteessi.
Tarjaadhaaf, bal'ina barbaaddu galchi.
Tarjaawwan gabatee, bitaa tarjaa ammaatti argamuu agarsiissa.
Tarjaawwan gabatee, mirga tarjaa ammaatti argamuu agarsiissa.